Sheeko Magaceeda La yidhaahdo Waa lakala Qaadaa. | Shabakada Gabooyaha
Sheeko Magaceeda La yidhaahdo Waa lakala Qaadaa.
Jun 11, 2015 - jawaab
Wariye Maxamed Cali Waji.
Xikaayaadka Qisada Murtida iyo Maadda iyo sheekaad inoo dhaxa.
Wakhtiyada xaadirka ah markaynu eegno inta Af-Soomaaliga ku hadasha meel kastaba ha joogaane waxaad moodaa in ififaallo Cusubi dadka ay ku soo badanayaan , haddaynu goonni ula baxno waa sheekadeenu halkay ku saabsan tahaye xanuunkan dadka madaxa kaga dhaca waa bidaarta iyo tima la’aanta’e , waxaad moodaa maalinba maalinta ka damaysa inay kusoo badanayso Bulshada.
Barigii hore muddo aan sidaa u sii fogaynba haddii laga eego 50ama 40-sanadood ka hor, dadka bidaarta leh ee magaalooyinka soomaaliland joogaa waxay ahaaayeen dad tirsan waxaana lagu naanaysi jiray tukaanka heleb haysto ama tukaanka ninkii bidaarta lahaa haysto hebel bidaar, maanta shantii nin ee ku dhaafayaba Afar ama sadex ayaa bidaar leh, waxaad moodaa in bidiirtii ay soo korodhay tiradeedu.
Hadaba sheekadeena oo arrinkaa ku saabasan ayaa laba nin oo saaxiib ahaa dhalinyarana ahaa oo midkood guur meer ahaa ayaa ahaa raggaa xiiran ee aan xabbad lagu ogayn, kan kala waxa uu ahaa nin kaftan badan oo muxash-xasha ah oo dadka aadka ula kaftamaha ah , ninkan bidaarta leh ee guurmeerkii wuxuu la sheekaysan jiray inan iyana markaa ay markaa meel dhigteen oo ay ku tala galeen inay is guursandaa , saaxiibkii wuu ka war hayay waanuu la tabaabushayn jiray kolba haylakay wax la marayso waanay isku warrami jireen .
Maalin buu dabadeed ininkii u waydaartay gabadhii oo uu u tagay isagoo la kaftamaya , inantii ku yidhi hebel ma kusoo maray caawa, markaasay tidhi mayee ma arag wali, markaasuu ku yidhi hebel hadduu yimaaddo maqaaxidaasaan fadhiyaaye ha iigu yimaaddo, markaasuu qosloo intuu sidaa u eegay ku yidhi ;naa iska ilaali waa la kala qaadaaye.
Inaadeer maxaa la kala qaadaa?
Dee bidaarta, iyadu markaa ma oga inuu inankani bidaar leeyahay .
Oo yaa bidaar leh?
Saaxiibkay ninkan kula sheekaysta.
Waxay ku tidhi war naga tag wuu soo xiirtaaye!!
Oo habeen walba muu soo xiirtaa, naa waanad ogayne xabbad laguma ogay tin ma leh.
Oo miyaa laka qaadaa?
Waa laka qaadaa habla badan oo magaalada jooga ayaa waxaa la haasaawi jiray rag sidan oo kale ah , dabeedna qaadsiiyay oo maanta gambada ku adkeeya madaxa, markaa iska ilaali.
Inantii baa rumaysatoo tidhi waa la hoogaye sideen hadaba sameeyaa dee illeen ninka arrina way inaga dhaxaysaaye?
Markaasuu yidhi laba tallaabo yaanuu kuu soo dhaafin, waliba habeenkii ayuu fayriskeedu boodaa ayuu ku yidhi bidaarta oo waa la kala qaadaa, oo wuu iskaga tagay.
Oo isna walaal yuu ka qaaday ?
Adeerkii oo dhintay oo xanuun sanayay ayuu ka qaaday oo bidaar lahaa ayaa qaadsiiyay .
Dee bal orod waaban is ilaalin doonaaye.
Markiiba wuu u yimid markaasuu soo ag fadhiistay , markaasay intay qososhay hoosna u foorarsatay ku tidhi , war igala durug waan ogaadoo waa la kala qaadaaye.
Waar orod iga wallo waa la ii sheegee ha iqaadsiinine , habla badan ayaad qaadsiiseene.
Naa waxan aad sheegaysaa waa maxay?
Bidaarta dee?waa laka qaadaaye .
Markaasuu qosluu ku yidhi naa yaa kugu yidhi waxan.
Nin iga naxaya.
Oo kaasi waakee?
Markaasay tidhi waa yarkii cali eed saaxiibka ahaydeen.
Markaasuu farxoo intuu qoslay ku yidhi ;naa wallahi nacas baad tahay , haddii la kala qaadayo maan isagaba qaadsiiyo.
halkan ka dhagayso sheekadaas oo aad u xiiso badan :